MUUQAAL: Cali Xaraare oo Warbixin ku Lafa Guray Furitaanka ay Ilhaan Cumar Dalbatay iyo Sida wax u dhaceen | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Cali Xaraare oo Warbixin ku Lafa Guray Furitaanka ay Ilhaan Cumar Dalbatay iyo Sida wax u dhaceen
Oct 8, 2019 - 10 Aragtiyood
Minneapolis ( Kalshaale ) Wariye Cali Xaraare ayaa Warbixin ku lafa guray arinta ku saabsan Dacwada Furitaanka ee ilhaan Cumar ay ka gudbisay Saygeeda.
Warbixinta ayaa lagu xusay inuu Jiro Xidhiidh ay Ilhaan la leedahay nin Cadaan ah oo doorwayn ka qaatay Doorashadii ay Ilhaan kusoo baxday.
Xaaskii Ninkaasi oo Dhakhtarad ayaa markii ay Arintan soo baxday waxay Dhankeeda dacwad Furitaan gudbisay.
Daawo Warbixinta Xiisaha leh iyo Cali Xaraare oo lafa Guraya Arinta Ilhaan Cumar.
Horta ninkani malaayacni sanaa.Waabau iga yaabiyaa.Maxaa ka galay sheegsheega Gabadhan ama waxyaabo badan oo aan ku arkay.
Haa.kaftanka siyaasada hayska wato,laakiin wax caruurtu ogtahay ayuu la soo shirtagaa.
Ma shaqo la’aan ayaa ku dhacday.
Bal waxay war nooga dhigayaan eega! Naag iyo Ninkeedii baad is furay!!!
Waa dhaqan guur iyo abaar maskaxeed laysku madhxay!
War ninkaan gabadha hanoo daayo. Maxaa daba dhigay.
Gabadhu qof xun Maaha. Ninkeey caruurta u dhashana nin xun Maaha. Laakiin dabaqadaha ayaa kala duwanaanta kenaayo.
Wuu qaldamay maxaa yeelay markeey dabaqadaas fuushay in uu iska sii boxo ayey ahayd. In uu u sii fududeeyo ayey ahayd.
Yes, sida aqyaarta iga horeeysay sheegeen, Mr. BaHaL, Garqaad, iyo Laalays Isaaq, waa runtood.
Ninkaan youtube ka wax soo galgaliya ee Cali Xaraare, iyo Somalida oo dhan waa in eeysan ku mashquulin gabadhaan iyo ninkeedii hore iyo caruurtooda. Waa wax private ah. Marka dadka ha’isku xishoodaan. Kalshaale.ca, sidoo kale isku xishooda, oo qoyskaan Somaliyeed ka hadalkooda shaqo haka dhiganinia.
Waa la’is furaa, waa wax wanaagsan oo aan qurxooneeyn laakin, Somalida iyo dadka faqriga ah ku badan, hadanna tan maahan wax u gooni ah qoyskaan.
Midda kale, gabadhaan Ilahaan ee xildhibaanada ah, in eey nin cadaan saaxiib la noqotay iyo in kale, mid naga mid ah oo cadeeyn karra malahan. Marka, xataa hadii eey dhacdo, waa xor qofka in uu raaco qofkuu doona. Umana maleeynayo iyada oo wali laqabo in eey waxaas sameeyn laheeyd. Waa eey idinka caqli badantahay daanyeeryahay gabadhaas, ee faraha ka qaada.
God bless Sommalia.
Haweenka oo dhan. Xeerka
Qoyska waa mid.
Guurka iyo Furidda*(, CUDUR-DAAR MA LEH)
I KNOW EVERY FAMILY HAS ITS”PROBLEMS.
———–Ma Guur mise Gaabsi? Ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha u doonta India
Irsaaqadda haddii alle kaa geliyo inaad ka fakadho un sidee daawadayaal ama views ku heshaa meel xun,xishood la aan iyo waalli ayaad ka dhaxashaa aakhirka.
Bal ninkaa weyn wuxuu meesha lasoo kambadhuudhsaday eega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gabadhaan nolosheeda privateka ah ma Somali public discusion ayey noqotay..
Imisa meesha ku jira ayaa naagtooda furay ama ayaga bacda banaanka loo dhigay..kkkkk
Xalay waaxaan la kulmay mid cid hoose isla yihiin Ilhan oo aaminsan in Yuhuud ka furtay ninkeeda….kkkkkkkk
Gabadhaan nolosheeda ayey ku jirtaa..yaan dambi laga guran.
Cali Xaraare waa mooryaan af ku dhiigle ah.
Asagaba habeenkii marka saqraamo hadba meel ku hoydaa..Markaad ayuu rabaa in wax noo sheego iyo wax qaldan..fucking daanyeer.
Dhabayacada dhaqan u degsan ayaa jirey; Gabar lagu xad gudbay quruun dhan u dunta..
Afkiina ka ilaashada maamada iyo ehelkeeda…
Ka bilaaba daanyeerkaan Cali Caraare Alkolayste.
Ninkaa ku yidho Yuhud ayaa ka furtay ninkeedi,waa macquul.
Sxb anuu waxaan galay xisbiyada siyaasada ee dalka Nederland,2000-kii waxaa ku biiray Xisbi la yidhaa,C D A.
In badan kumaan jirin.
Horta waxaa jira ogolaasho kaa horeeya.In lagaa ogoladaa Bulshada aad xisbiga kula jirto.Waa lagu ogol yahay,laakin waxaa jira ogolaasho ah inaad iyaga ka mid noqoto.
Runtii waxaan arkay waxa kale.Inaad iyaga la mid noqotaa waa middda kobaad ee ogolaasha kuu keenaysa.
Sii wadadida siyaasadan aan ku jirtaa waxay wadataa wax yaabo badan.
waxay noqtay in aan waxa badan oo xag dhaqan iyo Diinta ah ka talaabsado – waa hadii aan rabo inaan heer ka gaadho siyaasada wadankan,iyo inaad ahaado qofka aan ahay oo iskaga hadho siyaasada hamigeeda. Waa iskaga hadhay.
Gudida Gobolka Gerderland.
Marka hore waa lagu hor yaaci,waxaa jira indho sarcaad,waxaa la rabaa Bulshada aad ka dhalay in aad xisbiga ku soo xidho.Shir ilaa shir iyo casho.Bulsho cusub iyo waayo cusub.Saaxiibo cusub iyo dhaqan cusub.
Hadaba anuu waa aamikaraa in Gabadhaasi Cadow Islaam ay gacanta u gashay.
Noloshu waxay leedahay Temptations.